Iincwadi ezi-8 ezilungileyo zengqondo onokuziphosa | Uncwadi lwangoku
Lola ifani | | Ezahlukeneyo
Ngokwe-RAE, "isayikholoji yisayensi okanye isifundo sengqondo nokuziphatha kwabantu nakwizilwanyana." Iyahlekisa indlela abanye, kubandakanya nam, xa sisiva igama lesayensi esicinga ngalo ngamanani ezigidi, iifomula kunye namagama angaqondakaliyo. Nangona kunjalo, inxenye yoluntu lwezenzululwazi lenze iinzame zokusinika ulwazi olunokusizisa, njengabafundi abangafundanga, kufutshane nolwazi lwenzululwazi. Ukufunda malunga nokusebenza kwengqondo ayisiyiyo, ke ngoko, uyolo olugcinelwe kuphela abo basigqibileyo isidanga. Singayenza sonke. A) Ewe, Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi malunga nendlela ingqondo kunye nokuziphatha komntu okusebenza ngayo, jonga kolu luhlu lwee-8 zeencwadi zengqondo ezingcono ongakwaziyo ukuziphosa.
1 Iindlela zokuphucula ukuzithemba
2 Kukuncedwa kokubandezeleka
3 Wonge umntwana wakho wangaphakathi
4 Ukuhamba kunye ne-duel
5 Bukela ukuthetha ngesondo nonyana wakho
6 Umfundi kaSage
7 Amandla othando
8 Isikhokelo esisebenzayo kunyango lweentloni kunye noxinzelelo lwentlalo
Iindlela zokuphucula ukuzithemba
Ungayithenga le ncwadi apha: Iindlela zokuphucula ukuzithemba
Ukuzithemba, ubukhulu becala, kukwazi ukuzithanda kwaye kuchaphazela indlela esinxibelelana ngayo nabanye. Ukuba nokuzithemba okusempilweni kwaye kuyinyani okusivumela ukuba sijongane nobomi ebomini, kwaye kubandakanya uthotho lwezakhono kunye nokukwazi ukuhlala sikuphucula. Iindlela zokuphucula ukuzithemba Ngu-Elia Roca, ngumsebenzi obaluleke kakhulu kuye nawuphi na ugqirha ofuna ukunceda abathengi babo kule ndawo, kodwa ikwalufundiso olufanelekileyo kubo bonke abaphulaphuli kuba izisa umfundi ongekho ngokukodwa kufutshane nolwazi lwezenzululwazi nolungqongqo ngendlela ebonakalayo necacileyo.
Phakathi kokuqulathwe yile ncwadi, uya kufumana izixhobo ezifanelekileyo zokuvavanya ukuzithemba kunye nothotho lweendlela, ukuqonda, isimilo kunye neemvakalelo, ezinokukunceda ukuphucula Ukongeza, umbhali unikezela inxenye yamaphepha akhe Hlalutya ubudlelwane phakathi kweengcinga kunye nokuzithemba. Iingcinga zethu ziinkolelo esinazo ngathi kwaye ezo nkolelo zichonga indlela esenza ngayo kwaye silibona njani ilizwe. Ukuba ufuna ukuphucula ukubanakho ukuzithanda okanye ukuba unomdla wokufunda ngakumbi malunga nokuzithemba, le ncwadi ifundeka lula iya kuba luncedo kakhulu.
Ungayithenga le ncwadi apha: Kukuncedwa kokubandezeleka
«Ngaba sakha sacinga malunga nokubandezeleka ngokulula? Okanye, ukubeka ngenye indlela, bungakanani ubomi obusindayo ekubandezelekeni kwethu? », Ngale mibuzo mibini uMaría Jesús Álava Reyes uqala incwadi yakhe. Kubo bonke ubomi bethu siza kujongana namaxesha amnandi kunye namaxesha alusizi, izinto azihlali zihamba ngendlela esifuna ngayo, kwaye oko akunakuphepheka. Nangona kunjalo, sinokukhetha indlela esijongana ngayo neengxaki kunye nexesha esilichitha ekubandezelekeni.
Kukuncedwa kokubandezeleka sisixhobo esihle kakhulu isinceda siziqonde iimvakalelo zethu kwaye isifundisa indlela yokujongana nazo, Esi sisitshixo sokonwaba kwaye lawula ubomi bethu ngaphaya kweemeko. Sonke siyasokola kwaye sonke siyasokola ngokungenamsebenzi ngamanye amaxesha. Ukuba ufuna ukuyitshintsha loo nto, ukuba ufuna ukugxila kubomi bakho ekukhohlisweni, shiya isithuba sale ncwadi kwithala lakho.
Wonge umntwana wakho wangaphakathi
Ungayithenga le ncwadi apha: Wonge umntwana wakho wangaphakathi
Kutheni le nto singabo? Kubaluleke kangakanani ukuba sasingobantwana njani kuthi? Wonge umntwana wakho wangaphakathi ngu-Victoria Cadarso isinceda ukuqinisa "umntwana wethu wangaphakathi", ukubuyisa amava ethu okuqala, ubume bethu nayo yonke into esiyifihlileyo ukuze singaziva sisengozini. Ngale ncwadi uyasiqonda isidingo sokunxibelelana kwakhona "nomntwana wakho wangaphakathi" kwaye ufumane kwakhona "umntwana owenzakeleyo", iziporho zakho, loo nxalenye yakho oyishiileyo ilibele, sonke sinayo. Ukongeza, umbhali unika inkcazo eneenkcukacha zamanqanaba ophuhliso kwaye abonelele Izitshixo ezisisiseko zokujongana noloyiko lwethu kunye neemvakalelo zethu.
Andikwazi ukushiya le ncwadi ngaphandle kwoluhlu lweencwadi ezi-8 eziphambili zengqondo onokuziphosa. Yincwadi ebalulekileyo, njengokuba usebenza nomntwana wethu ongaphakathi, Ukuyiqonda yile nto eza kusivumela, ngamazwi ombhali, ukuba "sixhumane kwakhona nentliziyo yethu", ngothando, nemvelaphi.
Ukuhamba kunye ne-duel
Ungayithenga le ncwadi apha: Ukuhamba kunye ne-duel
Ukuphulukana nomntu ngamava anzima kakhulu ekufuneka ukuba sijamelane nawo kungekudala okanye kamva. Nangona kunjalo, kunzima kwaye kunzima kwabo bahamba nelahleko. Ukuhamba kunye ne-duel ngu-Manuel Nevado noJosé González yincwadi exabisekileyo yeengcali anyanga abagulayo abahamba kule meko kwaye, Kwakhona, kwabo bafuna ukuqonda ngcono inqanaba lentlungu Kwaye bafuna, ngokobuqu, ukunceda umntu ohamba nayo.
Incwadi ibonelela ngezixhobo eziyimfuneko zokwenza oku kuhambelana, sigxininisa ukubaluleka kokujamelana nokucalula kwethu malunga nosizi ukuze sikwazi ukusebenzisa le misebenzi icetywayo ngokufanelekileyo. Ndiyifumana inomdla kakhulu ukuba banikezela isahluko esipheleleyo sencwadi "kwintlungu yomntwana." Ngamanye amaxesha, nokuba ungumzali, umntakwenu omdala okanye udade, utitshala okanye utitshala, kunzima ukuthetha malunga nelahleko okanye ukungabikho komntwana. Sikufumanisa kunzima ukuqonda indlela avakalelwa ngayo kwaye uyisingatha. Kumsebenzi wakhe, uNevado y González, naye sikhokele kwindlela esimele ukuxelela ngayo ukufa kubantwana kunye nendlela esimele ukuwusingatha ngayo lo mbandela.
Bukela ukuthetha ngesondo nonyana wakho
Ungayithenga le ncwadi apha: Bukela ukuthetha ngesondo nonyana wakho
Ukuba kunokuba nzima ukuthetha ngokufa nabantwana bakho, ukuthetha ngesondo kuhlala kungabi lula. Incwadi Bukela ukuthetha ngesondo nonyana wakho, ngumhlohli uNora Rodríguez, ngu Isikhokelo esinokuba luncedo kakhulu ukuba, njengomzali, ufuna ukuxoxa ngesondo nabantwana bakho, kodwa awazi ncam ukuba ungayenza njani.
Kutheni kubalulekile ukuthetha ngesondo nabantwana bakho? Njengoko umbhali esitsho, ngamanye amaxesha abantwana baziva ngathi banalo lonke ulwazi oluyimfuneko malunga nesondo. Nangona kunjalo, ukuba ayingobazali abathi, ngokwendalo, babasondeze kolu lwazi, abantwana balufumane bodwa. Ewe, apho sonke sijonga ukuthandabuza: kwi-intanethi.
Ngelishwa, umbono obonisiweyo kwinethiwekhi yesini ayisoloko iyinyani. Ke ngoko, ukuba sivumela abona bancinci ukuba bazifundise "bebodwa", iingcinga ezingathandekiyo malunga nobudlelwane kunye nokwabelana ngesondo kuya kuqhubeka. Ulwazi lukhona, lufikeleleke kubo besebancinci kakhulu, kwaye njengabantu abadala singabanika oko kufunekayo ukuze baqonde into engeyonyani kuyo yonke into ezayo kubo kwaye sinako bancede baqonde isini ngaphandle koloyiko kunye nokungaqiniseki. Ngaba ungathanda ukuthetha ngalo mbandela nabantwana bakho? Le ncwadi yeyam yeengcebiso eziza kukukhokela ukuze ukwazi ukuyenza ngokuchanekileyo nangokukhuselekileyo.
Ungayithenga le ncwadi apha: Umfundi kaSage
Umfundi kaSage, ebhalwe yingcali yeengqondo kunye nomhlohli uBernabé Tierno, sisikhokelo esisebenzisekayo nesilula ukufundeka esisifundisa ukuba siphile ngcono kwaye sonwabe. Ngamanye amaxesha sihlala ngesantya esikhawulezileyo singayeki ukuzimamela, kwaye singayeki nokucinga ngomonzakalo esiwenzayo kuthi kunye nolonwabo esizinciphayo. Umbhali ucebisa ukuba sithathe isimo "sabafundi bezilumko", usimema ukuba sivule iingqondo zethu ukuba zamkele oko, silandela ukuqonda kwethu okuqhelekileyo, sinokujongana nobomi obungcono.
Ithenda inakho uku shwankathela imigaqo-siseko enamandla kunye namabinzana intanda-bulumko yobomi, yenza ukufundwa kwakho kube yinto entle kwaye inomdla. Ndivumele ndikunike isiqwenga sale jewel: «Sonke sifuna ukuphila ngcono. Sonke sifuna ukonwaba. Ukuba sifunda ukuba nobulumko kancinci akukho mathandabuzo ukuba singakufezekisa. Le ncwadi, ubuncinci kum, phantse i-epiphany ethembisayo isibonisa loo nto Sonke sinakho oko kufunekayo ukuze sonwabe kwaye oko kwakha ubomi obungcono, nobonelisayo kusezandleni zethu.
Ungayithenga le ncwadi apha: Amandla othando
Ndingathanda ukufaka enye incwadi kaBernabé Tierno kolu luhlu lweencwadi ze-8 zengqondo ezingcono ongakwaziyo ukuziphosa. Amandla othando, eyapapashwa ngo-1999, yenye yezinto ezibalulekileyo zalo mbhali. Uthando lukhukhula onke amanqanaba obomi bethu. Ibamba iincoko, iingcinga, iinkumbulo ... Uthando sisiseko sobukho bethu. Kodwa wakhe wazibuza ukuba luyintoni uthando?
Kule ncwadi, UBernabé Tierno ubonakalisa uthando, kwiifom zalo, kwinto eyenzayo. Iqokelela iimfundiso ezibalulekileyo malunga nothando, malunga nobudlelwane phakathi kokuncamathisela kunye nokuzithemba. Ngamafutshane, ukubonakaliswa kwamandla okuphilisa othando kunye neziphumo zokungabinayo. Inxalenye yokugqibela yencwadi, enikezela kumaxesha ama-3 abaluleke kakhulu ebomini, ifanele ukukhankanywa ngokukodwa: ukwaluphala, ukugula kunye nokufa. Isayikholojisti inikezela amaphepha okugqibela ukuhlalutya eyiphi indima amandla othando ayidlalayo kwezi zigaba zinzima.Ungaba nobuganga bokujonga uthando ngamehlo ahlukeneyo? Kwenze ngale ncwadi.
Isikhokelo esisebenzayo kunyango lweentloni kunye noxinzelelo lwentlalo
Ungayithenga le ncwadi apha: Isikhokelo esisebenzayo kunyango lweentloni kunye noxinzelelo lwentlalo
Akukubi ukuba neentloni, enyanisweni, sonke siziva sinovalo, uxinzelelo okanye iintloni ngaxa lithile ebomini. Kodwa kukho amanqanaba amaninzi entloni kwaye ngelixa kuyinto eqhelekileyo ukuziva uxhalabile ngamanye amaxesha, xa uxinzelelo lwentlalo luba namandla kwaye rhoqo lunokunciphisa ubomi bethu. Kwiimeko ezigqithileyo, ukuba neentloni kunokuthintela abo banengxaki yokugcina ubudlelwane babo, ukuqhubela phambili kwinqanaba lobungcali okanye ukwenza imisebenzi yemihla ngemihla njengokuya emsebenzini.
UMartin M. Antony noRichard P. Swinson basinika i Isikhokelo esisebenzayo kunyango lweentloni kunye noxinzelelo lwentlalo. Ababhali bakhethe unyango kuxinzelelo lwentlalo, esebenzayo kwaye isekwe ngokwenzululwazi, kwaye unayo zilungelelanisiwe ukuze abafundi abangabalulekanga ukuba baziqonde kwaye uzisebenzise. Incwadana yemisebenzi yincwadi esebenzayo esifundisa ukuba silawule ngcono ubudlelwane bethu phakathi kwabantu kwaye isinceda siziva sikhululekile xa sinabanye. Ndicinga ukuba le ncwadi iyacetyiswa, kufanelekile ukuvala olu luhlu lweencwadi ze-8 zengqondo ezingcono ongakwaziyo ukuziphosa, kuba ayinakunceda kuphela ekuphuculeni indlela onxibelelana ngayo nokusingqongileyo, kubonakala kum sisixhobo esiluncedo kakhulu ukuze usazi ngcono nzulu kunye nokuzama ukoyisa uloyiko ekungasoloko kulula ukuloyisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Iincwadi ezi-8 ezilungileyo zengqondo onokuziphosa
Uluhlu oluhle, kodwa ndicinga ukuba ezinye zezihloko ozikhombayo azinangqwalaselo iphambili kwisayikholojhe kwaye ikwindawo yesibini, kwaye umxholo ophambili kukuzinceda okanye into enjalo.
UJavier Pellicer: «Ukupapasha bekusoloko kunzima kakhulu»